ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့တော်၌ ဗုံးသုံးလုံး ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် နှစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိ
ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး၏ နေအိမ်အပါအဝင် စစ်တွေမြို့ရှိ နေရာသုံးခုတွင် ယနေ့နံနက် အစောပိုင်းက ဗုံးသုံးလုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် နှစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ဟု သက်ဆိုင်ရာက ပြောကြားသည်။
ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ရည်မှန်းချက်ကို ပြည့်မီစေမည့် အိမ်ခြံမြေခွန်
အိမ်ရှင်အိမ်ငှားများထံမှ စည်ပင်သာယာက ကောက်ခံသော အခွန်များမှာ စည်းကြပ်ပုံစနစ်ပိုင်း ခိုင်မာပြီး ဖြောင့်မတ်စွာ စီမံခန့်ခွဲမှုရှိသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယင်းတို့၏ အခန်းကဏ္ဍမှာ မြင့်မားသင့်သလောက် မြင့်မားမှု မရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်။
Lachlan McDonald ရေးသားသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက SolarHome တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၂ သန်း ထပ်မံထည့်ဝင်
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှိ အိမ်ထောင်စု ၄,၀၀၀ ကျော်အား ဆိုလာစွမ်းအင်စနစ် တပ်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့သည့် Solar Home ကုမ္ပဏီကို အား မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ လုပ်ငန်းများ တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အကျိုးတူ ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူများက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၂ သန်း တိုးမြှင့် ရင်းနှီးမြှပ်နှံလိုက်သည်။ ထိုရင်းနှီးမြှပ်နှံသူများတွင် ယခင်ကနဦး စတင်တည်ထောင်ခဲ့မှုတွင်.
NLD လက်ထက် ငြိမ်းစုစီဥပဒေ ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်ရေး၏ ခြေလှမ်း
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (NLD) ဦးဆောင်တဲ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သက်တမ်း နှစ်နှစ်စွန်းချိန်အတွင်း ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခြင်း၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြန်ပြင်ဆင်ဖို့ ကြိုးစားနေပါပြီ။
ခေါင်းစီးဓာတ်ပုံ- စတိဗ် တစ်ခ်နာ
ဓာတ်ပုံအက်ဆေး, စီးပွားရေး, ဆောင်းပါးကဏ္ဍ
ပညာတစ်ပိုင်းတစ်စဖြင့် ကျောင်းထွက်ခဲ့ရသူတစ်ဦးသည် လူ ၁၀၀ ခန့်ကို အလုပ်ခန့်ထားနိုင်သော ပန်းပဲလုပ်ငန်းတစ်ခုကို ပဲခူးရှိ ကျေးလက်ဒေသတစ်ခုတွင် အောင်မြင်စွာ လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် သူ၏ ပန်းပဲလုပ်ငန်းသည် နိုင်ငံ၏ အကောင်းဆုံး အသေးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းအဖြစ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ စာသားနှင့် ဓာတ်ပုံ – သောမတ်စ် ကင်း(န်).
မိသားစုဝင်ငွေ ကျပ် သုံးသိန်းရှိလျှင် အိမ်ဝယ်နိုင်မည့်စီမံကိန်း စတင်ရန် လွှတ်တော် ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံ
ဉာဏ်လှိုင်လင်း ပြည်သူများထံသို့ ငွေထုတ်ချေး၍ အိမ်ရာဝယ်ယူစေမည့် စီမံကိန်းများစတင်နိုင်ရေးအတွက် ဂျပန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး အေဂျင်စီ(JICA) ထံမှ ယန်း ၁၅ ဘီလျံ ချေးယူခွင့်ပြုရန် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ထံ ယနေ့ တင်ပြလိုက်သည်။ မိသားစုလစဉ်ဝင်ငွေ ကျပ် သုံးသိန်းရှိလျှင် တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာ၊ ကျပ် ငါးသိန်းရှိလျှင်.
လားရှိုးရှိ ရိုးမဘဏ်ခွဲ ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဘဏ်ဝန်ထမ်းနှစ်ဦး သေဆုံး
လားရှိုးမြို့ ရိုးမဘဏ်ခွဲတွင် ယနေ့ညနေပိုင်းက ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ဘဏ်ဝန်ထမ်းနှစ်ဦး သေဆုံးပြီး ၂၂ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
ဇီးရိုးလိုင်း စိစစ်မှုကို နှစ်နိုင်ငံသာ လုပ်မည်၊ အကြမ်းဖက်သမားများရှိနေသည်ဟု ယူဆ
မြန်မာနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ်မျဉ်းရှိ ဇီးရိုးလိုင်း (Zero Line) အတွင်း ဝင်ရောက်နေထိုင်သူများကို နှစ်နိုင်ငံသာ ပူးပေါင်းစိစစ်မည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါနေရာတွင်ရှိနေသည့် ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကိုလည်း အသိပေးထားပြီးဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီး ဌာန အမြဲတန်းအတွင်းဝန် ဦးမြင့်သူက Frontier ကို ပြောကြားသည်။